အရမ်းထက်မြက်လွန်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှု သိပ်မရှိနိုင်ကြဘူး - YOYARLAY Digital Media and News
သင့်မှာ အရမ်းကြီး မထက်မြက်တဲ့ အလုပ်ရှင် တစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးလား? ရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ နည်းနည်း ခေတ် နောက်ကျနေတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ သင့်အလုပ်ရဲ့ အခြေခံ သဘောတရားလေးတွေကို နားလည် သဘောမပေါက်တာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ နောက်တစ်ချက်ကတော့ သူဘာ့သာ သာမန်ပဲ ရိုးရှင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲနေတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကို နည်းနည်းလေးပိုပြီး ထက်မြက်လာစေချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိခဲ့ဖူးလား?? ရှိခဲ့ဖူးရင် သတိလေးတော့ ထားပေးပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ လူတစ်ယောက်က ပိုတော် ပိုထက်မြက်နေတိုင်းလည်း ပိုကောင်းနေတာ မဟုတ်လို့ပါပဲ။
အဲ့ဒါက ဒီလိုရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကျောင်းသား/သူ စုံညီပွဲ၊ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေးသမား အသိုင်းအဝိုင်းတို့ အစရှိတဲ့နေရာတွေအတွက် ဆိုရင်တော့ … ပိုတော်၊ ပိုထက်မြက်တဲ့လူက ပိုပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု ရှိမှာပါ။ ဒါက အဓိပ္ပာယ် လည်းရှိပါတယ်။ ဦးနှောက်စွမ်းရည် မရှိဘဲ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကို ဘယ်လိုဦးဆောင်မလဲ၊ ပြဿနာ တွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ၊ ဟုတ်တယ် မလား? ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုလောက်မက Dean Simonton ဆိုတဲ့ စိတ်ပညာသုတေသီ တစ်ဦးဟာ အဆိုကြမ်း တစ်ခုကို ပြခဲ့ပါတယ်။ ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ကောင်းပါတယ်။ အလွန်ကြီး ထက်မြက်မသွားခင် အထိပေါ့။ သူက အဲ့ဒီလို ဆိုထားပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကို စမ်းသပ်နိုင်ဖို့ နီးစပ်လာပါပြီ။ ပြီးတော့ သူအနေနဲ့ အဲဒီကနေ တစ်ခုခု ရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။
အခြား လေ့လာသူ နှစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ Simonton ဟာ ရောင်းဝယ်ရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ နည်းပညာ အစရှိတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၃ဝက အလုပ်ရှင်ပေါင်း 379 ယောက်ကို လေ့လာမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကို IQ စစ်ဆေးမှု မေးခွန်းတွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်သမား 8 ယောက်စီတိုင်းကို သူတို့ အလုပ်ရှင်ရဲ့ အလုပ်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အမှတ်ပေး အကဲဖြတ်စေပါတယ်။ ဒါတွေဟာ လုံးဝပြည့်စုံ လုံလောက်စေတဲ့ အချက်အလက်တွေတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ IQ စစ်ဆေးမှုတွေဟာ သိပ်ပြီးယုံကြည်ဖို့ မလိုအပ်ပေမယ့် အလုပ်သမားတွေက သူတို့ အလုပ်ရှင်ကို ပေးတဲ့ အမှတ်တွေကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ ရလဒ်တွေကနေ ရှင်းလင်းတဲ့ ပုံစံတစ်ခု ထွက်လာမယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ IQ စစ်ဆေးမှု အမှတ်များလေလေ အလုပ်သမားတွေက သူတို့အပေါ် အမှတ်ပေးတာ ပိုများလေလေ ပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီမှာ လွဲချော်သွားတဲ့ အချက်က IQ 120 နဲ့ 120 အထက် ရှိတဲ့လူတွေဟာ သူတို့လောက်မှ IQ မရှိတဲ့လူတွေထက် နှိမ့်ကျစွာ အမှတ်ရနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေအချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်က ဆွဲထားတဲ့ အစီအစဉ်ဟာ အောက်ခြေ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ လိုက်မမှီနိုင်တာသော်လည်းကောင်း၊ သူတို့ရဲ့ နည်းဗျူဟာတွေဟာ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ရှုပ်ထွေးလွန်းပြီး ပြီးမြောက် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ ခက်ခဲလွန်းနေတာသော်လည်းကောင်း၊ နောက်တစ်ချက်ကတော့ IQ မြင့်လွန်းတာကြောင့် သာမန်လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရ ခက်ခဲတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေတာမျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့လည်း သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ လိုက်မမှီနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အတုယူ လေးစားဖို့ဆိုတာတော့ ခက်ခဲသွားမှာပါပဲ။
ဒါဟာ ကုမ္ပဏီတွေက ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ရာထူးတိုးမပေးဖို့ ဒါမှ မဟုတ် အလုပ်မခန့်ဖို့ ဖြစ်လာစေမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူးလို့ သုတေသီတွေက မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ အဲဒီအစား သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အလုပ်နယ်ပယ်ကို မူတည်ပြီး IQ အဆင့်ဟာ ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်လို့ စဉ်းစားထားသင့်ကြောင်း သူတို့က အကြံပြုထားကြပါတယ်။ ပိုပြီး အရေးကြီးတာ တစ်ခုကတော့ သူတို့ဟာ အဲ့ဒီ IQ မြင့်ခြင်းဆိုတဲ့ အတားအဆီးကနေ ဘယ်လို ကျော်လွှားရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားဖို့ပါပဲ။ မဟုတ်ရင်တော့ IQ မြင့်မားခြင်း ပြဿနာရှိနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ သူတို့ ဦးနှောက်ကို သုံးရမယ်အစား သူတို့ရဲ့ ဩဇာအာဏာကို သုံးရမယ့် အနေအထား ရှိနေပါတယ်။
Previous Previous post: ပညာတတ်ခြင်း မတတ်ခြင်းနှင့် စိတ်နေသဘောထား
Next Next post: နှုတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း၊ ကွဲခြင်းများအတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ
ယခုအပတ်မှာတော့ ငါးရာ့ငါးဆယ်ဇာတ်တော်များထဲမှ ဒုမ္မေဓဇာတ်ကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ Post Views: 2,639